Koorsada GvSIG ayaa lagu dabaqay Qorshaynta Xuduudaha - Geofumadas
Ogast, 2012 Baridda CAD / GIS, GvSIG
Ka dib marka la eego hanaanka geedi socodka gvSIG Foundation, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno horumarinta koorso kaas oo lagu horumarin doono isticmaalka gvSIG oo lagu dabaqayo hannaanka dalabka dhulka.
Koorsadan waxaa maamula CREDIA, oo ah qorshe wax ku ool ah oo lagu abuuray istaraatiijiyadda joogtaynta mashruuca Waddada Mesoameric Biological Project (PROCORREDOR). Foundation wuxuu leeyahay kaalin, marka laga reebo ururinta iyo keydinta macluumaadka, deeq waxbarasho iyo adeegyo takhasus gaar ah oo ka jira aagga sawirka. Xiriirinteeda Barnaamijka Bilaashka ah wuxuu u muuqdaa mid naga mid ah kuwa ugu xiisaha badan mashaariicda badan oo ay ka gudbaan kadib marka xiritaanku yimaadaan istaagid; marka falsafada farsamooyinka bilaashka ah la isticmaalo, shabakadaha internetka ayaa la abuuri karaa wixii ka dambeeya xogta, taas oo aan rajeyneyno inay saameyn wanaagsan ku yeelan doonto maamulka waarta ee aqoonta. Qayb ka mid ah arrintani waxay ku dhacday Symposium Symposium sameeyey dhowr maalmood ka hor, caymiska CREDIA wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah xulafada ugu muhiimsan ee qaabeynta bulshada Isticmaalayaasha GvSIG ee Honduras.
Kusoo laabashada koorsada, tani waxay ka dhigan tahay fursad waxbarasho oo la adeegsanayo aaladaha Nidaamka Macluumaadka Geeyska ee lagu dabaqo Qorshaynta Xuduudaha. Fikradaha aasaasiga ah ayaa lagu gudbin doonaa qorsheynta iyadoo la raacayo habka dhuleed iyo Nidaamka Macluumaadka Juquraafiyeed, iyagoo ogaanaya kiisaska qaarkood lagu hirgaliyo Honduras.
Waxyaalaha koorsada waxaa loo kala soocayaa saddex qaybood:
Marka ugu horeysa, qaybaha aragtida ah ee Qorshaynta Xuduudaha, Kartoonka iyo Nidaamka Macluumaadka Juquraafi ayaa la soo bandhigi doonaa. Tani waxaa la rajeynayaa in ay heerarka kaaliyeyaashu ku saabsan tahay isticmaalka in kartoonka sawirku uu leeyahay qorsheynta dhulalka sida jaamacadaha caadiga ah, iyo wax ka mid ah hababka. Gelinka dambe, gvSIG waa la rakibayaa, codsiga wax ku oolka ah ee mawduuca laga hadlayo wuxuu bilaabmayaa.
Maalintii labaad, kiisaska dhabta ah ee gvSIG ayaa lagu shaqeyn doonaa amar dhuleed. Nidaamku waa mid xiiso leh sababta oo ah ka-qaybgalayaashu waxay baran doonaan isticmaalka gvSIG, iyada oo aan lahayn mashquulinta badhannada, laakiin halkii codsiga isticmaalka kiisaska.
Maalinta saddexaad, waxaa loo adeegsan doonaa Qorshayaasha Maareynta Dhulka.
Taariikhaha waa 5, 5 iyo 7 ee Sebtembar ee 2012.
Goobta: Xarunta Gobolka ee Dukumentiyada iyo Qorista Bay'ada (CREDIA), ee La Ceiba, Honduras.
Qiimaha ardayda, aasaaska, dawladaha hoose iyo NGO-yada ayaa waxoogaa ka badan qiimaha 150, oo ay ku jiraan fasaxyada qaxwaha iyo qadada.
Ma jiraan wax ka hadhay si ay ugula taliyaan koorsada
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tan iyo koorsooyinka kale:
Post Previous«Previous Dhaqanka cusub ee barashada
Post Next GPS iyo Google Earth ee IskaashigaNext »